Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 23/10/2020)
Tupu ị nwere ike na-enweta ezigbo Spanish tapas, piazzas na Rome ma ọ bụ Mbara ụlọ dị n'elu ụlọ na Prague, ihe dị mkpa bit nke admin a chọrọ! nanị tinye, ndị ọzọ na-akwadebe ị bụ mgbe ị na-eme atụmatụ a njem Europe, ka ukwuu, gị Ohere nke fun na a nchegbu-free njem na-adịgide ndụ ruo gị anya.
Ya mere, ebe bụ Save A Train n'ọnụ: họrọ a top ise, ga-dos maka na European njem! Ma eleghị anya, ọ na-aṅụ na Hofbrauhaus na Munich, ma ọ bụ na-ewere a kanaal tour na Amsterdam, ma ọ bụ n'inyocha David-ọtụtụ akụkụ – na Florence. Ihe ọ bụla, akara ndị ala na-eme atụmatụ gị na njem ha gburugburu. Mma site ụgbọ oloko.
NDỤMỌDỤ 4: Assemble your travel documents is part of plan a journey to Europe
Dị ka e kwuru n'ihu, ọ dị mfe n'elu ime ma na-agbalị piakota na ukwuu. Ọ bụ kpam kpam ihe kwere nghọta. Your oké ọnụ ahịa ezumike kwesịrị ka a tinye n'ọrụ ọma, ya mere, ọ dị mfe iji na-agbalị n'elu-abịa gị itineraries mgbe na-eme atụmatụ a njem Europe. Otú ọ dị, nke a nwere ike ịdị ọnụ (ghara ikwu na-agwụ ike), dị ka n'elu-mbukota njem na ọtụtụ aga kwa ụbọchị ole na ole na-eduga ná ndị ọzọ oge na-aga, na ndị ọzọ gas ma ọ bụ gbaa ụgbọ okporo ígwè. Na oké ikpe, ọ nwere ike na sabotaji a njem, ọ ghọọ a blur nke hotel ego-ins na-elele-outs (na mgbe nile mbukota na unpacking), mgbe na-ekiri a mgbe-gara odida obodo mba gara aga ụgbọ okporo ígwè ahụ na windo. Ọ bụrụ na ọ kwe omume, jiri nwayọọ. ị zọpụta na njem ma nweta ihe oge inyocha gị ebe.
Anyị ndụmọdụ bụ isi ozugbo na igwe ndọrọ ego mgbe ị na-abata na Europe na ịdọrọ ego na-eji gị igwe ndọrọ ego kaadị. Ọ bụ ihe dị mfe, na ọnụego mgbanwe na ị ga-esi maka azụmahịa bụ fọrọ nke nta N'ezie mma karịa ihe ọ bụla ọnụego anyị ọbụna nwetara n'ụlọ mmiri. Kpọọ gị akụ tupu ị na-ahapụ ka ịjụ banyere mba igwe ndọrọ ego azụmahịa ụgwọ, nakwa dị ka na-agwa ha na ị ga-eji gị kaadị ná mba ọzọ. Ọ bụrụ na ị naghị agwa ha, ọ pụrụ ịgwa ha ka ha na-eche na ọ bụ wayo, na ga-egbochi gị kaadị. Ọzọkwa, jụọ ma ọ bụrụ na gị akụ nwere mba ebe ma ọ bụ mmekọrịta na obodo mmiri na Europe.
NDỤMỌDỤ 9: Don’t forget to call your phone carrier before you plan a journey to europe
Kpọọ gị ụgbọelu ozugbo ị zuru ezu ka atụmatụ a njem Europe ma na-a plan if ị na-eme atụmatụ iji ekwentị gị, na-eme ka ahụ n'aka na ị melite ekwentị gị iji zere mberede data ebubo (na nkenke: gbanyụọ cellular data na igbochi ọnụ ọgụgụ nke ngwa ọdịnala na nwere ike iji cellular data). na, dị ka a plan, arapara onwe Wi-Fi netwọk maka nbudata na-eziga ozi-, ịlele ahụ Web na iji ngwa ọdịnala. Europe nwere ọtụtụ wifi hotspots, otú ị ga-enwe nke aka maka ogologo. Nhọrọ, ịzụta a SIM kaadị maka ekwentị gị mgbe ị na-na Europe.
Ọrụ amalite site buru a obodo na-amalite na rụchaa na (maka ugbu a, ọ dị mkpa na-amalite ma na-akwụsị ndị njem na otu ebe). Mgbe ahụ họrọ ọpụpụ ụbọchị, ogologo oge njem ga-na ole ebe na-agụnye. Ọrụ nwekwara ike họrọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ anya na obodo na Europe, na European Union ma ọ bụ nanị ndị Schengen Mpaghara. The ngwa ga-ịmepụta otu njegasi, mezue na Airbnb udu ke bụla obodo, maka ndị na a mmefu ego.
Travlelers can use na Eightydays website or the newly launched iOS ngwa to plan their European voyages.